I-Easy Homemade Color Colors Sparkler Recipes
Iziqhumane zizinto ezincinci zomlilo ezikhutshwe ngesandla ezikhupha iintlanzi ezivuthayo kunokuba ziqhube. I-sparklers iquka intsimbi encinci okanye intonga yomthi ehlanganiswe nomxube olula we-pyrotechnic. Abaqhathanisi bebaladi banokulula ukwenza njengabaqhaqhaqho. Ukwahluka kusekho kwi-oxidizer esetyenziswayo.
Uphinda uhlalutye ukuhlolwa kwetangatye , ngaphandle kokutshintsha ukusukela ekubeni uyazi ukuba imibala ilindele kwiion iiloni ezahlukeneyo.
I-potassium nitrate okanye i-saltpeter iya kunika umbala we-violet. I-nitum nitrate iyatshisa. I-Strontium nitrate iyatshisa ibomvu. Ngaphandle kokuyalelwa kwivenkile yokubonelela ngeekhemikhali, unokufumana i-strontium nitrate kwiintsimbi eziphuthumayo kunye ne-potassium nitrate kwiindawo ezithile zokugcina igadi (okanye unokuzenza ngokwakho ). Unokudibanisa kwezinye izalathisi zesinyithi ukusuka kuvavanyo lomlilo okanye uluhlu lomlilo , kodwa uhambe umbala omnye. Ukuba uzama ukudibanisa imibala, uya kuphefumula nge-basic gold sparkler.
Kukho iindlela ezininzi zokupheka iimbala ezikhanyayo . Nazi ezinye izibonelo. Izithako zidweliswe ngokwemiqathango yesisindo, ngoko unokusebenzisa i milligri okanye amagremu okanye i-ounces ... nantoni na eyenzela yona.
5 izingxenye ze-strontium nitrate
1 inxenye shellac
Gcina iintambo zensimbi okanye iintonga zokhuni kumxube kwaye uvumele ukuba zomile ngokupheleleyo ngaphambi kokusetyenziswa. Qiniseka ukuba ushiye indawo elaneleyo kwintonga ukwenzela ukuba unobambelele ngokukhuseleka.
300 izingxenye ze potassium chlorate
60 izingxenye ze-barium nitrate
Iingxenye ezingama-60 ze-aluminium, i-flitter, okanye i-granules
2 iinxalenye zelahle
I-10% dextrin kwisisombululo samanzi
Gubungela iingcingo okanye iintonga kumxube owenziwe kwizithako ezomileyo ngesisombululo esaneleyo se-dextrin sokwenza i-slurry eninzi. Dry the sparklers ngaphambi kokusetyenziswa.
Enye inketho ye-sparkler eluhlaza kukufaka indawo ye-boric acid okanye i- borax kwi-nitum nitrate.
14 izingxenye ze-potassium nitrate
3 izingxenye zesulfure
3 izingxenye zelahle
2 izingxenye ze-aluminium flitter (intlanzi)
10% dextrin emanzini
Gqiba iintonga kumxube owenziwe kwiizithako ezomileyo ezineesisombululo esaneleyo se-dextrin ukwenza i-slurry.
Qaphela ukuba iliso lomuntu alixhalabeleli kumbala we-violet. Umbala omfusa unzima ngokugqithiswa ngumbala onokuveliswa naliphi na imichiza engcolisayo kumxube. Ukuba i-sparkler ibonakala iluhlaza kunombala obomvu, ithetha ukuba i-sodium ikhoyo. Ityuwa yinto enokubakho.
Izibonelelo kwi-Sparkler Recipes
Ngokuhlolisisa ezi ndlela zokupheka, unokubona i-alitum e-flitter ingenakongezwa ukuze wenze intlanzi kunoma yiphina inkwenkwezi. Iintlobo ezintle zezinye iimboni zivelisa iintyatyambo. I-Titanium yenza amabala amhlophe ngelixa iintsimbi zensimbi zivelisa iintsimbi zegolide.
I-Dextrin ibinzana eliqhelekileyo kunye nophethiloli kwiindlela zokupheka ezintle. Ukuba ayitholakali, ushukela okanye isitashi singasetyenziswa.
Eminye imibala yeentlanzi ziyakwazi. Ngokomzekelo, ukusebenzisa ityuwa yethusi kuza kuvelisa i-blue okanye i-flame eluhlaza, kuxhomekeke kwimeko ye-oxidation yobhedu.
Umbala ongapheliyo we-sparkler uluphuzi okanye igolide, kodwa umbala ungaqakanyiswa kwaye uphuculwe ngokungeza inani elincinci yetyuwa yetyuwa okanye i-sodium chloride (NaCl) kumxube.
Ukongeza isona esona sincinci setyuwa kwi-sparkler ebomvu kunokuvelisa ilangabi le-orange. I-salcium isaliti inokuvelisa umbala we-orange.
Indlela yokwenza amaBombs Bath Baths
Indlela yokwenza i-Rainbow kwi-Glass Density Display
Ingxoxo (i-colloquial public)
IiHolo zeHlabathi zeHlabathi zeHlabathi
Uthelekiso lwe-Baccalaureate yamazwe ngamazwe kunye nokuPhakamisa okuPhambili
I-Women's Strike for Equality in 1970
Ukuzivocavoca ekuKhankeni izivakalisi ngoMphathi